Sidda Loo Horumarin Karo Nolosha |Tukesomalism.com |
Waxaa cad in qofku uusan ka maarmin in uu wax kororsado (barto) ama uu naftiisa horra mariyo, waqtiga oo aad ka faa’idaysaa wuxuu ku dhaxalksiiyaa inaad in badan horumarto dhowr qodob oo aan muhiim u arko in qofku si fudud u keeni karo dhibaatana uusan kalla kulmayn laakiin wax badan uu noloshiisa kaga bedeli karo waa kuwan.
Aqriska buugaagta oo la badiyo
Akhriska buugaagta waxay kuu siyaadinaysaa inaad fahanto wax ka jirra caalamka iyo aqlaaq ahaan inaad hesho, iyo wax adiga ku badelo sidda fikirka gaaban. Akhriska waa waxyaabaha ugu badan ee qofku caqliga iyo aragtidaba kor ugu qaadi karo muhiimna ma’ahan inuu badanyahay buuga aad akhriyeyso ee awoodaada keliya akhri si aad uga hesho khibradaha dadkii tegey iyo kuwa jooga iyo xaalado badan oo nolosheena kusaabsan.
Luuqadaha inaad wax kabarato
Luuqada waa waxa bini’aadam ay isku fahmaan. Barashada luuqad kale waxay kuu sahleysaa inaad fahanto dhaqanka luuqada aad baratay dadkiisa. Barashada luuqadu waa furaha nolosha iyo fahanka dadka aad luqadooda baratay siiba luqadaha muhiimka sidda Ingariiska, Carabiga, Faransiiska iyo Isbaanishka IWM si ay in badan kuu caawiyaan.
Sameey wax adiga dabeecad kuu ah
Waxaad sameyni kartaa waxyaabo badan, Sidda inaad qorida ka dhigato dabeecad ama akhriska ama dhegaysiga dadka kalle ama sidda loo hadlo ama khudbad loo jeediyo ama xubnaha jirka looga hadlo. Waxaa haboon inaad nafsadaada dabeecado wanaagsan oo faa’ido kuu leh aad la timaado. Dabeecadaada nooc walbo hana noqoto laakiin ha noqoto mid adiga faa’ido kuu leh marwalbo.
Baro koorsooyinka cusub
Qolkaada ka dhigo meel adiga ku dhiiri geliyo
Haddii aad tahay arday misana qofkalle waxaa haboon meesha aad degan tahay qolkaada waxaa haboon inuu kuu noqdo meel adiga ku dhiiri geliyo. Qolka hurdada ama kan akhriska waxaad ka dhigi kartaa xarun aad naftaada ku horra mariso markaas waa in laga helaa qolkaaga waxyaabo ku dhiiri geliyo sida ereyo, sawiro dad ku dayasho mudan iyo muuqaalo hadba waxaad adigu xiisayso si aad u ahaato qof mar walba soo jeeda.
Wakhti fiican kac subaxdii
Subaxdii oo la kaco wakhti fiican weyfiicantahay, haddii aad tahay arday waa wakhtiga ugu wanaagsan in la daakiro (la aqriyo), maskaxdana wey degantahay wakhtigaas, waxaana fiican inaad salaada subax haleesho, haddii kalle isku day inaad xilliga qoraxdu soo bexeyso soo jeedo waayo waxaa laga hellaa hididiilo wanaagsan waana waqti wax badana la qabsan karo waxna laqorshaynkaro feker iyo xifdi fiicana leh.
Aad ayey u fiicantahay inaad ku dadaasho dhisida jirka waxaana haboon in muuqaalkaada yahay mid soo jiidasho leh. Dhisida jirka iyo daryeelka caafimaadka wuxuu muhiim u yahay naftaada iyo muuqaalkaaga ee ku dadaal inaad asbuuciiba 2 ama 3 goor jirdhis(exercise)samayso ama socodka iyo dhaqdhaqaaqa badso tani waxay kaa bad-baadinaysaa cuduro fara badan.
Marka horre ku bilaaw noloshaada buug cusub
Wey wanaagsantahay inaad sameysato buug ka turjumaayo wixii aad qabani lahayd aragtida dhow iyo midda fog waxaad qabani lahayd. Noloshaada waxaad u sameysaa buug cusub aad ku qorto waxaad qabatay ama qaban doonto siddoo kale horumarkaad gaartay iyo waxyaabaha ku guul darasaysatayba wuxuu kaa kugu caawinayaa inaad guul gaarto.
Warqad ku qoro waxaad doonta inaad noqoto mustaqbalkaada
Waxaa haboon inaad hiigsanayso riyo aad u weyn, inaad tahay qof ku xisaabtamo mustaqbal wanaagsan. Qiyaas waxa aad noqon doonto shan sano ama toban sano kadib iyo waxyaabaha kuu suura geli kara waxaad jeceshahay inaad noqoto xiligaas. Tani waxay muhiim u tahay qofkasta oo nolosha qiimaya markaas waxaad noloshaad u samayn kartaa hadafyo aad hiigsato.
Sameeyso qof aad la tartanto
Markii aan dhigini jiray iskuulka waxaan xasuusta inaan ka maseeri jiray ardeygii hello lambarka koobaad. Xittaa jaamacada waxaan ahaa qof aan dadaal badneyd balse markii dambe waxaan bilaabay inaan ka maseero ardeydii aniga saaxibada illa ahaa. Nolosha markii aad leedahay qof aad la tartanta waxaa kuu suurta gal ah inaad gaarto guushaada. Waxaa si cilmiyaysan loo ogaadey in bini`aadanku wax badan ku qabsado marka uu dareemo inuu jiro qof ama cid la tartamaysa marka waxaa fiican kadib markaad qorato u jeeedooyin kaaga nolosha in uu jiro qof aad is barbardhigto sidda inaad ku tartantaan xifdinta quraanka u diyaar garowga imtixaanada iyo kuwa shaqadaba.
Qor waxyaabaha aadku liidato
Qofwalbo wuxuu leeyahay waxyaabo badan uu ku liito. Inaad qorto waxyaabaha aad ku liidato waxay kuu suura gelinaysaa inaad ceebahaaga hesho iyo inaad xalkooda baafiso(raadiso) waa muhiim inaad midaan samayso, waayo waxbadan oo hadda kaa daahsan ayaad heli kartaa markaas.
Diirada saar inaad leedahay liis nololeed
Qor dhammaan waxyaabaha aad jeceshahay inaad qabato mustaqbalka dhow, midka dhexe iyo midka fogba adigoo ka fiirsanay qoristooda raacsiinayaya xiliga lagu fulin karo iyo qaabkay usuura gelinkaraan.
Usamayso noloshaada hal ku dhig
Waxaa haboon inaad si fiican aad uqeexikarto waxa aad qabanayso. Mar walba iyo xilli walba cusko waxa aad qabanayso. Qeex go’aamada culus ee ismiidaaminta mudan. Qofka marka la eego heererkiisa nolosha waxaa soo foodsaara go’aamo aad iyo aad u adag, tana waxay kaaga baahantahay inaad si gaar ah u takoorto si gaarana ulla dhaqanto.
Sameyso dhaqamada cusub
Waxaan la soconaa in aduunka is badelo maalinba maalinta ka dambeeysa waxaan markhaanti ka nahay in xilli walba ka gedisanyahay xilligii horre hadda adigoo aan khilaafayn diinta iyo dhaqanka toosan waxaa fiican inaad la jaanqaado is bedelada nolosha carabkaga macaaniso dad cusub la xiriirto meela cusubna baro.
Ka hor tag dadka dabeecadaha qalafsan( Negative people) Waxaa jirra dad aad u dulqaad yar, dadkaan oo amar taaglayn ku caan baxay marka waa inaad dadkaan oo kale noloshaada ka fogaysaa ama si taxadar leh ulla dhaqantaa.
Baro sidda loolla dhaqmo dadka dabeecada xun
Haddii dhalinyarada aad la tahay saaxibada ay yihiin kuwa dabeecad qalafsan maxad sameynaysaa haddii aad isleedahay waad ka maarantaa misana aqabad weyn ayuu ku gelinayaa iwm waxaa haboon inaad iskeega dheeraato dadka noocaan ah, balse waxaa jirra dad dabeecad qalafsan hadana aadan ka maarmi karin sidda waalidka, qof aad u shaqayso iyo mid kuu shaqaya, midaan ayaa kaaga baahan xal u gaar ag iyo siddii aad uga guul gaari lahayd.
Saaxibadaa wax kabaro
Waxaa jirra in saaxibadaa yihiin kuwa kalla du-duwan shakina kuma jiro inaad la dhaqanto saaxiibo aad u kalla dabeecad duwan, dulqaad siddoo kalle mid aqoon leh, mid jaahil ah dhamaantoodaa waxaad kabarani karta aad noloshaada ku horra marin karto, iskana jir kuwa liita ama xun-xun. Marwalbana waxaad ku dadaashaa inaad yeelato saaxibo wanaagsan. Waxaa jirra inaad leedahay saaxibo xun-xun oo adiga hoos kuu ridaayo balse aad jeceshahay la socodkooda. Marwalbo waxaa kuu wanaagsan inaad yeelato saaxibo wanaagsan oo adiga kor kuu qaadayo. Saaxiibka wanaagsan iyo faa’iidada uu ku yeelan karo. Alle (SWT) waxa uu Qur’aankiisa Kariimka ku leeyahay “Ruuxii uu Sheydaan u noqdo saaxiib ayaa leh saaxiibka ugu xun”. Halkaasi waxa aad ka garan kartaa in nolosha ay qeyb weyn ku leeyihiin saaxiibadu. Haddii ay saaxibadu noqdaan kuwo wanaagsan waxay helayaan raali ahaansho Alle iyo wanaag badan.
Haddiise ay noqdaan kuwo xun oo isugu yeerra ama ku saaxiiba xumaan waxa ay hoy u noqonayaan sharka iyo halaag dhamaantii. Rasuulkeena (SCW) waxa uu inagu dhiirigeliyey in aan yeelano saaxiib wanaagsan kana dheeraano saxiibka xun. Ogow in uu rasuulkeenu (SCW) uu xadiis ku yidhi “Waxaa jira toddobo ruux oo Alle harkiisa gelin doono maalinta qiyaame, marka aanay jirin meel kalle oo la harsadaa ilaa harka Alle mooyee, waxana toddobadaasi ka mid ah labo ruux oo Alle dartii u saaxiibay kuna kalla tegey illaa maalinta Qiyaame”. Haddaba haddii ay siddaa tahay waxaa waajib ina saaran ah in dadka aan la saaxiibeyno ay noqdaan dad wanaagsan oo leh calaamado wanaagsan, haddii kale qofyohow ogow in ruux xun oo aad la saaxiibtaa uu kuu horseedayo “hoog iyo halaag”. Astaamaha saaxiibka wanaagsan waxa kamid ah hadii aynu qodobayno.
Saaxiibka wanaagsani waa midka dhaqankiisu wanaagsan yahay oo had iyo jeer kuugu yeera wanaaga kaana reeba xumaanta.
Saaxibka wanaagsani waxa uu kugula taliyaa wixii dani ay kuugu jirto, waxaana uu ka hortagaa wixii aan dan kuu ahayn.
Saaxiibka wanaagsani waa kan kula farxa haddii aad faraxsan tahay, waxana uu kaala murugoodaa wixii aad ka murugooto.
Saaxiibka wanaagsani had iyo jeer waa uu ku farxad geliyaa oo waxa uu kaaga sheekeeya wax fiican oo farxad leh.
Saaxiibka wanaagsan waxad had iyo jeer ku aragtaa meelaha kherka sida masaajidada, madrasadaha cilmiga, goobaha waxbarashada iyo dhammaan goobaha wanaaga lagu yaqaan.
Saaxiibka wanaagsani waxa uu xifdiyaa sirtaada, mana faafiyo wax adiga kugu saabsan.
Saaxiibka wanaagsani waxa uu qariyaa ceebahaaga oo muujiyaa wanaagaaga.
Saaxiibka wanaagsani waa kan ku qabta (celiya) marka aad carooto ee ku dejiya.
Saaxiibka wanaagsani waa mid naxariis badan, jillicsan oo hadal macaan.
Saaxiibka wanaagsani waa ruux dulqaad leh, aan dad kalena kaaga sheekeyn xumaantooda.
Saaxiibka wanaagsani waxa uu had iyo goor ku xusuusiyaa geerida, Alle a cabsi iyo qiyaame.
Iska yareey daawashada TV-ga
In badan oo dadka ka mid waxay farxada iyo horumarka ka raadiyaan daawashada tv-ga tani waa waqti dhumis waana wax la tijaabiyey ee waqti ha iskaga dhumin isku day inaad adigu noqoto qofka la daawado bulshadiisa horumar u horseeda. Micnahayga ma ahan haba daawanin tv-ga waxaan kalla jeeddaa inaadan wakhtigaada midka ugu muhiimsan aadan ku luminin.
Noqo qof shaqeysto
Midaan ayaa kaa dhigaysa qof faraxsan iyo mid aduunka wax ku kordhiya magacna ku yeesha ee haka daalin inaad wax uun qabato iskana jir firaaqada iyo camal la’ aanta. Nafsadaada waa inaad ka illaalisaa wakhti lumidka, waxaana lagaaga baahan yahay jaan tus wanaagsan inaad nafsadaada tusto.
Next post Waa Maxay Suukh-gaynta? “marketing”
Previous post Dowladnimada iyo Aragtida Soomaaliyeed |Tukesomalism.com
June 13, 2017 at 1:18 pm	— Reply
Mansha allah alleh haynaga dhigo kuwii maqla hadalka kiisa wanaagsana qaata amiiin